व्यवसायीको सेवा गर्न संघमा प्रवेश गर्दैछु–किसान – Todaypokhara
व्यवसायीको सेवा गर्न संघमा प्रवेश गर्दैछु–किसान
युवा व्यवसायी किसान सुनार यतिबेला चर्चामा हुनुहुन्छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको ३१ औं महाधिवेशनमा सदस्यको उम्मेदवारी दिएपछि उहाँ चर्चामा आउनु भएको हो । विभिन्न संघसंस्थामा नेत्तृत्वदायी भूमिका खेल्नु भएका किसान उत्पीडीत समुदायका एक्ला उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण व्यवसायी संघ कास्कीको अध्यक्ष, पोखरा मल व्यवसायी संघको अध्यक्षलगायत विभिन्न सामाजिक तथा व्यवसायिक संघसंस्थामा नेत्तृत्वादायी भूमिका निभाइसक्नु भएका उहाँ तेजरत्न ज्वेलर्सको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ । उहाँसँग पोखराप्लस अनलाइन पत्रिकाका लागि छवि मगरले गरेको कुराकानी ।
घरदैलोमा जाँदा मतदाताबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ ?
चुनावी अभियानमा हिड्ने क्रममा धेरै उद्योगी व्यवसायीबाट मलाई साथ मिलेको छ । अत्याधिक मतका साथ विजयी हुनका लागि मलाई सबैले शुभकामना दिनुभएको छ । उहाँहरुबाट सकरात्मक प्रतिक्रिया पाएको छु । युवा व्यवसायी संघमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने शुभकामना दिनु भएको छ । यसबाट म हौसिएको छु ।
किन उद्योग वाणिज्य संघको सदस्यमा उम्मेदवारी दिनु भएको हो ?
म मूलतः उद्योगी व्यवसायीको सेवा गर्नका लागि संघमा प्रवेश गर्दैछु । विभिन्न संघसंस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिसकेको र व्यवसायिक क्षेत्रमा सफल भएकाले उद्योगी व्यवसायीहरुकैै सल्लाह र सुझावमा म उम्मेदवार बनेको हुँ । पदाधिकारी, खुल्ला तथा अन्य सदस्य कुनै पनि पदमा उत्पीडीत समुदायको उम्मेदवार छैनन् । २१ जना सदस्यका उम्मेदवारमध्ये उत्पीडीत समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै संघमा छिर्न पहिलो पाइला चाल्ने म एक्लो व्यक्ति हुँ । अर्को कुरा नेपालको संविधानले नै हरेक क्षेत्रलाई समावेशी बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । त्यो आवाजलाई सम्बोधन गर्न पनि म संघमा छिर्न आवश्यक छ । अर्को कुरा मैले वस्तुगत संघको पनि प्रतिनिधित्व गर्छु । सबै क्षेत्र, समुदाय, बर्ग र व्यवसायीको हक हितका लागि काम गर्न मैले उम्मेदवारी दिएको हो ।
तपाइका एजेण्डा के–के छन् ?
संघको नेत्तृत्वदायी भूमिकामा म जान लागेको होइन । त्यसैले मेरा यी एजेण्डा हुन् र म त्यसलाई लागु गर्न सक्छु भन्न सक्दिन । त्यस्तै मतदाताकहाँ पनि त्यस्ता आश्वासन बाँडेको छैन । तर, व्यवसाय र व्यवसायीको विकासका लागि सबल युवा नेत्तृत्व हुनुपर्छ भन्ने मेरो मुल नारा हो । व्यावसायिक हितको सुरक्षा र कल्याणको अभिवृद्धि गर्न, उद्योग, व्यापार, सम्बन्धित व्यवसाय र व्यवसायीहरुको हक हितका लागि गठित व्यवसायिक एकता मजबुत पार्न, देशको अर्थतन्त्रप्रति समयानुकुल परिवर्तनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पु¥याउन, विदेशिने युवा जनशक्तिको रोकथामका लागि व्यवहारिक सीप तालिमको व्यवस्था गर्नमा टेवा पु¥याउने लगायतका मेरा एजेण्डा छन् । मेरो प्रतिबद्धता पुरा गर्नका लागि आफ्नो ठाउँबाट सक्दो पहल गर्नेछु ।
तपाई चुनाव जितेर संघमा जानुभयो भने के गर्ने योजना छ ?
संघमा मैले मात्रै गरेर केही हुँदैन । तर, आफ्ना कुरा राख्ने एउटा फोरम भने अवश्य बन्छ । व्यवसायीलाई कर शिक्षा प्रदान गर्न सघाउने, उद्योग व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन लबिङ गर्ने र समृद्ध पोखरा निर्माणको अभियानमा निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको गरिमालाई उच्च बनाउने र संघका हरेक गतिविधिलाई प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्न मैले सक्दो योगदान पु¥याउने योजना छ । अर्को कुरा हेल्प डेस्कलाई चुस्त तरिकाले चलाउने र उद्योगीको सामूहिक बिमा बनाउन पहल गर्नेछु । मलाई आशा छ, यि कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै मतदाताहरुले अत्यधिक मतका साथ बिजयी बनाउनुहुनेछ ।
कर प्रणालीमा सुधार गर्नेछु– महासचिवका उम्मेदवार अधिकारी
पोउवा संघ अध्यक्षका उम्मेदवार पालिखे घरदैलोमा